နှလုံးမှာတိုင်းမိန်းကလေးအမြဲခက်ခဲကြိမ်အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးမှရောက်လာမယ်လို့နှင့်သင်နှင့်အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းအချိန်လေးဝေမျှဖို့ရာ ပို. ပင်သင့်အကြောင်းအားလုံးသိတယ်သူတစ်ဦးရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေရှိသည်ဖို့အိပ်မက်။ အခွက်တဆယ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်တိုးတက်ရမည်ဖြစ်သည်တစ်ခုကျွမ်းကျင်မှု - သို့သော်မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။ ချစ်ကြည်ရေး - ယုံကြည်မှု, နားလည်မှုနှင့်ဘုံအကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံတည်ဆောက်မယ့်ဆက်ဆံရေးမျိုး, ဒီတော့မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်: "မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်လာဖို့ကိုဘယ်လို," အားလုံးအထက်, ငါတို့သည်သင်တို့သူတို့ကိုယ်သူတို့အပေါ်အလွန်ခက်ခဲလုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်လာဖို့ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်လာရန်မည်သို့:5ရွှေရောင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို
သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်တစ်ခုအတိုးယူပါ။ သူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာ၌ရိုးရိုးသားသားအကျိုးစီးပွားနှင့်သူမဆိုပေးထားသောအခြေအနေမှာ feeling ဘယ်လိုမေးပါ။ ရှယ်ယာသူမ၏နေ့စဉ် အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှု , စစ်မှန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဖုံးကွယ်ပါဘူး, ရှိခဲ့သည်ရှိရာ, သငျသညျကိုမွငျလြှငျအဘယျသို့အကြှနျုပျကိုပြောပြပါ။ သင့်ရဲ့ရည်းစားကောင်းကောင်းခံစားရလျှင်, သူမ၏ သွား. ကြည့်ရန်သေချာစေပါနှင့်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးခဲဘွယ်စားဘွယ်ပူဇော်ကြ၏။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်၏အဆွေခင်ပွန်း၏အသက်တာ၌တစ်ဦးရိုးရိုးသားသားစိတ်ဝင်စားမှုပြသပါ။
နားထောင်ဖို့လေ့လာပါ။ တက်တက်ကြွကြွမဆိုအမှု၌ကဲ့သို့အဖြေကိုရှောင်ကွင်းမရ, ထိုလိုင်းများအကြားဖတ်ရှုသင်ယူစကားဝိုင်းမှာပါဝင်, သငျသညျသတင်းနှင့်အတူမျှဝေဖို့မိတ်ဆွေတစ်ဦးစို့။ "ငါမြင်" "ဟုတ်ကဲ့", "အဘယ်သူမျှမ" နှင့် သင်အမှန်တကယ်သူမ၏မိတ်ဆွေနားထောင်ဖို့သင်ယူခဲ့လျှင်အလွန်မကြာမီသင်ခံစားရရန်စတင်ပါလိမ့်မည်သည်သင်တို့အားငါ၏အကြံအစည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မယ်မတိုင်မီအခြားအရာတစ်ခုခုမှ၎င်း၏စပ်လျဉ်းနားလည်ပါတယ်။
အတူတူအချိန်ပိုမိုဖြုန်းနေကြတယ်။ ခေတ်သစ်အသက်တာ၏ရစ်သမ်ခုနှစ်တွင်သူ၏ချစ်ရာသခင်သည်မိတျဆှေကိုပဌနာနှင့်သူမလုပ်နေခဲ့ပုံကိုမေးရန်အချိန်ထဲကယူရန်အလွန်ခက်ခဲသည်ကိုပင်လျှင်။ သို့သော်မီးကထွက်ဝင်အချိန်ကျော်သစ်သားဆမ်းမပြုခဲ့ပါလျှင်ကောင်းစွာ, လူသိများသည်အဖြစ်လည်းခင်မင်ရင်းနှီးလာပါတယ်။ သငျသညျ, မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူလမ်းလျှောက်မှာအနည်းဆုံးအတူတူစားရန်ကြိုးစားပါ, သို့မဟုတ်ပါလျှင်, ဥပမာဖို့အချိန်, တစ်ဦးအလုပ်ရှုပ်နေအိမ်ထောင်စုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, သူမ၏ကူညီရန်ဆက်ကပ်။ ထိုသို့သောလုပ်ဆောင်မှုများပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်သင်၏နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအကြိုးရှိနိုင်ပါသည်။
အများဆုံးဂုဏ်ကျေးဇူးကိုရည်းစားအရသိရသည်။ ဆက်ဆံရေးကောင်းမြတ်သောအရာသည်အခြေအနေသတိထားမိနှင့်သူမ၏အကြောင်းကိုဒီပြောတှနျ့ဆုတျပါဘူး။ သငျသညျက၎င်း၏လုပ်ရပ်များနှင့်အတူသဘောမတူခဲ့လျှင်မှန်ကန်စွာရှုမြင်သင့်ရဲ့အမှတ်ဖော်ပြ, ကြောင်းသမျှဆုံးဖြတ်ချက်နားလည်ရန်ပေးကမ်းခြင်းအနေဖြင့်သူမသငျသညျ၎င်းငျး၏ထောက်ခံမှုမဆိုအမှု၌, လကျမခံခဲ့ပါဘူး။
မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုများနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်အတူမျှဝေပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဒုက္ခကွုံတှေ့တဲ့အခါမှာလူတွေကများစွာကသူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုကူညီမယ့်အလျင်၌ရှိကြ၏, ဒါပေမယ့်အသက်တာ၌ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုမိန်းကလေးများလည်းမရှိသည့်အခါ, လူအနည်းငယ်ကစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဝမျးမွောကျအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ သငျသညျချစ်ရသူတစ်ဦး၏ပျော်ရွှင်မှုကိုဝေမျှဖို့ဘယ်လိုမသိကြပါလျှင်တစ်ဦးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပျော်ရွှင်ဖြစ်ရပ်သင်ဖြစ်ပျက်လျှင်အဖြစ်? ဒါကြောင့်သူမရဲ့သူငယ်ချင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့
သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းရှိသင့်သောအရာကိုအရည်အသွေးတွေကိုစဉျးစားကွ? ကျနော်တို့ကိုအခြားသူများအတွက်တန်ဖိုးထားသောအရာကိုသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးထားသောကွောငျ့, ယခုသင်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်လာဖို့အတိအကျဘယ်လောက်သိစာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်သူတို့ကိုရေးရန်နှင့်အသံကျယ်ထွက်ဖတ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေ, သင်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့လိုခငျြမှသာလျှင်ကောင်းတစ်ဦးရည်းစားသုံးနိုငျဖွစျဖို့သတိရပါ။
သင့်ရဲ့ဝေါဟာရ buzz စကားလုံးများကိုအားသွင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
NLP - လူ့ထိတွေ့မှု၏နည်းလမ်းများ
အာဗြဟံသည် - အလုပ်မှာရှိသမျှသောလက်ပါဝင်သောအလုပ်အကိုင်မိသားစုနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်ကိုထိခိုက်အဖြစ်?
Bella Hadid ယော်ဒန်မြစ် Barrett နှင့်အတူသူမ၏ကိစ္စ commented
စက်တွေနဲ့အခြောက်ခံစက်များဆေး - သူတို့မှားရွေးချယ်မှုလုပ်ကြသည်မဟုတ်လော
ခွေး Eukanuba များအတွက် Feed
သားရေအကျီ - Fall 2015
Vinpocetine - အသုံးပြုမှုအတွက်လက္ခဏာများ
အဆိုပါ lymph node များဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Helenium - လွင်ပြင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
ပတ္တရားသို့မဟုတ်ဖူးခက် - သာ. ကောင်း၏ထားတဲ့?
ကြော် "မိနစ်" cookie ကို